ရနျကုနျမွို့တှငျး နယျလိုငျစငျပိတျပငျမှုက ရနျကုနျ-ဧရာဝတီမွို့အခြို့ကိုပို့ဆောငျပေးမယျ့ ကားတှကေိုလညျး သကျရောကျမှုရှိလာမှာလား? - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ရနျကုနျမွို့တှငျး နယျလိုငျစငျပိတျပငျမှုက ရနျကုနျ-ဧရာဝတီမွို့အခြို့ကိုပို့ဆောငျပေးမယျ့ ကားတှကေိုလညျး သကျရောကျမှုရှိလာမှာလား?
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး လှိုငျသာယာမွို့နယျကတော့ ဧရာဝတီတိုငျးသားတို့အတှကျ အဓိကလာရောကျလုပျကိုငျ စားသောကျ၊ နထေိုငျစရာတဈခုလိုဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒဂုံဧရာအဝေးပွေးဆိုတာက ရနျကုနျတိုငျးနဲ့ ဧရာဝတီတိုငျးတို့ကို အဓိကဆကျသှယျပေးနတေဲ့ အဝေးပွေးယာဉျရပျနားစခနျးကွီးတဈခုဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဒဂုံ ဧရာအဝေးပွေးလိုပဲ ရနျကုနျတိုငျးနဲ့ ဧရာဝတီတိုငျးကို ဆကျသှယျပေးနတေဲ့ ကားလေးဂိတျလေးတှကေိုလညျး လှိုငျသာယာမွို့နယျအတှငျးမှာ မွငျတှနေို့ငျပါတယျ။ အဓိကအနနေဲ့ကတော့ ဘီအိုစီမှတျတိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီမှာတော့ ဒေးဒရဲနဲ့ မအူပငျတို့ကိုသှားမယျ့ ကားလေးတှကေိုတှနေို့ငျပါတယျ။ ဒီထဲကကားတျောတျောမြားမြား ကတော့ AYY လိုငျစငျနဲ့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကလညျး ရနျကုနျုလိုငျစငျနဲ့ နယျလိုငျစငျဈေးနှုနျးကှာဟခကျြကွောငျ့ YGN လိုငျစငျကားလေးကိုရောငျးပွီး နယျလိုငျစငျလေးနဲ့လုပျစားနကွေရတဲ့ ကားသမားတှရှေိလို့ပါ။
ရနျကုနျ - ဒေးဒရဲလိုငျးမှာတော့ ကားလေးတှကေို အတှမြေ့ားရပွီး အမြားစုကလညျး အမြားအချေါ ဖငျကောကျ (Toyota Corolla) နဲ့ Probox ‌တှပေဲဖွဈကွပါတယျ။ ခိုငျးကောငျးတဲ့ Probox ကတော့ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာအကွိုကျကားတဈစီးဖွဈပွီး ဖငျကောကျကလညျး လေးအမြိုးအစားဖွဈလို့ မညှာတမျးခိုငျးလို့ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျနောကျဖုံးပါတော့ အနညျးဆုံး လူ ၃ ယောကျလောကျချေါသှားလို့ရပါတယျ။ “ အဓိကအနနေဲ့ကတော့ ခေါငျးခနျး ၁ ယောကျ၊ အလယျခနျး ၄ ယောကျနဲ့ နောကျဖုံးမှာ ၃ ယောကျဆိုပွီး တငျပါတယျ။ ခေါငျးခနျးက ၆၀၀၀၊ အလယျခနျးက ၃၀၀၀ နဲ့ နောကျဖုံးက ၂၀၀၀ ဆိုပွီး ယာဉျစီးခသကျမှတျထားပါတယျ” ဆိုပွီး ရနျကုနျ- ဒေးဒရဲမောငျးနှငျသူယာဉျမောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ကိုသနျ့ဇငျဦး (အမညျလှဲ)ကပွောပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တဈခေါကျ ကို ၂သောငျးခှဲလောကျရပွီး ဆီးဖိုးနှုတျရငျ ကနျြတာကယာဉျမောငျးအတှကျပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုလူမြားမြားနဲ့ တိုကျရိုကျဆှဲရတဲ့အပိုငျးကိုတော့ ယာဉျမောငျးတှအေနနေဲ့ အကွောငျးကွီးလို့သကျမှတျထားပါတယျ။ အကွောငျးတိုဆိုတာကတော့ ဟိုနား၊ဒီနားသှားရတာနဲ့ အကွောငျးကွီးဆိုတာကတော့ ဝေးဝေးမောငျးရတာ ဖွဈတယျလို့အငှားယာဉျမောငျးလောကမှာ ချေါဆိုသမုတျထားပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးအကွောငျး ကွီး ၂ခေါကျလောကျရရငျတော့ တျောတျောလေးနတှေ့ကျကိုကျပါတယျလို့ ကိုသနျ့ဇငျဦးက ဖွညျ့စှကျပွောဆိုခဲ့ ပါတယျ။
အဆိုပါကားလေးတှကေ အဝေးပွေးယာဉျလိုငျးကားကွီးတှထေကျစာရငျ စောငျ့ဆိုငျးခြိနျသိပျမလိုသလို သီးသနျ့ သှားခငျြသူတှအေဆငျပွတေဲ့နရောလေးတှဖွေဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အသုံးပွုသူအတျောအသငျ့ရှိပွီး အခါ ကွီးရကျကွီးတှလေိုမြိုး အဝေးပွေးကားလကျမှတျအခကျအခဲဖွဈတဲ့အခါ ဒါလေးကိုအသုံးရငျးကနေ ဆကျလကျ စီးဖွဈသှားကွတာတှလေညျးရှိပါတယျ။ “ ကြှနျတျောစစီးတုနျးကတော့ အထုပျနဲ့အပိုးနဲ့ဆိုတော့ နညျးနညျးအခကျ အခဲဖွဈတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အလယျခနျးကို ၄ ယောကျစာပေးပွီး တဈယောကျတညျးနဲ့ အထုပျဖွဈဖွဈ၊ နှဈယောကျနဲ့အထုပျဖွဈဖွဈ စီးလို့ရပါတယျ။ မဟုတျရငျတော့ ကိုယျ့အထုပျကိုယျ့ပေါငျပျေါ တငျရုံပဲရှိပါတယျ “ လို့ ယာဉျလိုငျးအသုံးပွုသူတဈဦးဖွဈတဲ့ ကိုရဲနိုငျ (အမညျလှဲ)က ဆိုပါတယျ။ နောကျထပျအားသာခကျြတဈခု တော့ ကိုယျကလညျးလှိုငျသာယာအနီးတဝိုကျမှာနမေယျ၊ ယာဉျမောငျးနဲ့လညျးရငျးနှီးမယျဆိုရငျ လာကွိုခိုငျးလို့ တောငျရပါတယျ ဆိုပွီးသူ့ရဲ့အတှအေ့ကွုံကို ဖွညျ့စှကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါကားလေးတှအေနနေဲ့ ရနျကုနျကနေ ဒေးဒရဲကို အခြိနျ ၁ နာရီ ၄၅ မိနဈ၊ ၂ နာရီဝနျးကငျြအတှငျးရောကျ ရှိနိုငျပွီး အဝေးပွေးယာဉျလိုငျးနဲ့သှားမယျဆိုရငျတော့ ၂ နာရီခှဲဝနျးကငျြလောကျကွာနိုငျပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး ကိုသနျ့ဇငျဦးက “ ကြှနျတျောတို့လောကမှာတော့ ဂိတျစီနီယာလုဖို့အတှကျ နညျးနညျးလေးလုမောငျးကတြာလညျးရှိပါတယျ။ ဂိတျဆိုတာနဲ့ပတျသကျပွီး ဆကျပွောရရငျတော့ ဂိတျကွေး ၅သိနျးပေးရပါတယျ။ ရနျကုနျဂိတျဘကျကိုပါ။ ဂိတျထုတျခံရရငျတော့ အဆုံးပေါ့။ ဒါကွောငျ့ သတိထားပွီးလညျး မောငျးကွရပါတယျ။ အဝေးပွေးယာဉျလိုငျးတှကေတော့ ဟိုနရောလူတငျ၊ ဒီနရောလူခရြှိလို့ ကွာတတျသလို လူပွညျ့သှားပွနျရငျလညျး မွနျမွနျလေးမောငျးကွပါတယျ ” လို့ဆိုပွနျပါတယျ။
လကျရှိတှငျ နယျလိုငျစငျမြားဖွငျ့ ရနျကုနျမွို့တှငျးပွေးဆှဲနမှေုအတှကျ အရေးယူရနျရှိကွောငျး ရနျကုနျတိုငျးဒေ သကွီးသယျယူပို့ဆောငျရေးကွီးကွပျမှုအာဏာပိုငျအဖှဲ့က မတျလ ၁၁ ရကျနေ့ မီဒီယာတှဆေုံ့ပှဲတှငျ ပွောဆို သှားခဲ့သျောလညျး မျောတျောယာဉျဆိုတာ တဈနိုငျငံလုံးမောငျးနှငျခှငျ့ရှိပွီး ၂၀၁၅ မျောတျောယာဉျအရအရေးယူ ရနျမရှိကွောငျး ယာဉျထိနျးရဲအရာရှိတဈဦးက ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ကိုသနျ့ဇငျဦးက “ရနျကုနျမွို့တှငျးဆိုတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့နဲ့သိပျတော့ မသကျဆိုငျပါဘူး။ ဆိုငျတယျဆိုရငျလညျး ရကျစှဲတိတိကကြထြှကျမလာသေးပဲကွညောထားတဲ့ အဆငျ့မှာပဲရှိသေးလို့ အရမျးကွီးတော့ပူပနျစရာမရှိပါဘူး။ နောကျပွီးနယျလိုငျစငျဆိုတာကလညျး ရနျကုနျလိုငျစငျထကျသကျသာလို့ လုပျကိုငျရအဆငျပွလှေယျကူတာ ကွောငျ့ကြှနျတျောတို့လို ကားသမားတှအေတှကျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ပိတျတယျဆိုတော့လညျး ပိတျတယျပေါ့ ” လို့သူ့ရဲ့အမွငျကို ပွောဆိုပေးသှားခဲ့ပါတယျ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း နယ်လိုင်စင်ပိတ်ပင်မှုက ရန်ကုန်-ဧရာဝတီမြို့အချို့ကိုပို့ဆောင်ပေးမယ့် ကားတွေကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိလာမှာလား?
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်ကတော့ ဧရာဝတီတိုင်းသားတို့အတွက် အဓိကလာရောက်လုပ်ကိုင် စားသောက်၊ နေထိုင်စရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒဂုံဧရာအဝေးပြေးဆိုတာက ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းတို့ကို အဓိကဆက်သွယ်ပေးနေတဲ့ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒဂုံ ဧရာအဝေးပြေးလိုပဲ ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းကို ဆက်သွယ်ပေးနေတဲ့ ကားလေးဂိတ်လေးတွေကိုလည်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းမှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ကတော့ ဘီအိုစီမှတ်တိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ဒေးဒရဲနဲ့ မအူပင်တို့ကိုသွားမယ့် ကားလေးတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီထဲကကားတော်တော်များများ ကတော့ AYY လိုင်စင်နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ရန်ကုန်ုလိုင်စင်နဲ့ နယ်လိုင်စင်ဈေးနှုန်းကွာဟချက်ကြောင့် YGN လိုင်စင်ကားလေးကိုရောင်းပြီး နယ်လိုင်စင်လေးနဲ့လုပ်စားနေကြရတဲ့ ကားသမားတွေရှိလို့ပါ။
ရန်ကုန် - ဒေးဒရဲလိုင်းမှာတော့ ကားလေးတွေကို အတွေ့များရပြီး အများစုကလည်း အများအခေါ် ဖင်ကောက် (Toyota Corolla) နဲ့ Probox ‌တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ခိုင်းကောင်းတဲ့ Probox ကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအကြိုက်ကားတစ်စီးဖြစ်ပြီး ဖင်ကောက်ကလည်း လေးအမျိုးအစားဖြစ်လို့ မညှာတမ်းခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်နောက်ဖုံးပါတော့ အနည်းဆုံး လူ ၃ ယောက်လောက်ခေါ်သွားလို့ရပါတယ်။ “ အဓိကအနေနဲ့ကတော့ ခေါင်းခန်း ၁ ယောက်၊ အလယ်ခန်း ၄ ယောက်နဲ့ နောက်ဖုံးမှာ ၃ ယောက်ဆိုပြီး တင်ပါတယ်။ ခေါင်းခန်းက ၆၀၀၀၊ အလယ်ခန်းက ၃၀၀၀ နဲ့ နောက်ဖုံးက ၂၀၀၀ ဆိုပြီး ယာဉ်စီးခသက်မှတ်ထားပါတယ်” ဆိုပြီး ရန်ကုန်- ဒေးဒရဲမောင်းနှင်သူယာဉ်မောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုသန့်ဇင်ဦး (အမည်လွှဲ)ကပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခေါက် ကို ၂သောင်းခွဲလောက်ရပြီး ဆီးဖိုးနှုတ်ရင် ကျန်တာကယာဉ်မောင်းအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူများများနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆွဲရတဲ့အပိုင်းကိုတော့ ယာဉ်မောင်းတွေအနေနဲ့ အကြောင်းကြီးလို့သက်မှတ်ထားပါတယ်။ အကြောင်းတိုဆိုတာကတော့ ဟိုနား၊ဒီနားသွားရတာနဲ့ အကြောင်းကြီးဆိုတာကတော့ ဝေးဝေးမောင်းရတာ ဖြစ်တယ်လို့အငှားယာဉ်မောင်းလောကမှာ ခေါ်ဆိုသမုတ်ထားပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအကြောင်း ကြီး ၂ခေါက်လောက်ရရင်တော့ တော်တော်လေးနေ့တွက်ကိုက်ပါတယ်လို့ ကိုသန့်ဇင်ဦးက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။
အဆိုပါကားလေးတွေက အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းကားကြီးတွေထက်စာရင် စောင့်ဆိုင်းချိန်သိပ်မလိုသလို သီးသန့် သွားချင်သူတွေအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသုံးပြုသူအတော်အသင့်ရှိပြီး အခါ ကြီးရက်ကြီးတွေလိုမျိုး အဝေးပြေးကားလက်မှတ်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခါ ဒါလေးကိုအသုံးရင်းကနေ ဆက်လက် စီးဖြစ်သွားကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ “ ကျွန်တော်စစီးတုန်းကတော့ အထုပ်နဲ့အပိုးနဲ့ဆိုတော့ နည်းနည်းအခက် အခဲဖြစ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အလယ်ခန်းကို ၄ ယောက်စာပေးပြီး တစ်ယောက်တည်းနဲ့ အထုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ နှစ်ယောက်နဲ့အထုပ်ဖြစ်ဖြစ် စီးလို့ရပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ့်ပေါင်ပေါ် တင်ရုံပဲရှိပါတယ် “ လို့ ယာဉ်လိုင်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုရဲနိုင် (အမည်လွှဲ)က ဆိုပါတယ်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခု တော့ ကိုယ်ကလည်းလှိုင်သာယာအနီးတဝိုက်မှာနေမယ်၊ ယာဉ်မောင်းနဲ့လည်းရင်းနှီးမယ်ဆိုရင် လာကြိုခိုင်းလို့ တောင်ရပါတယ် ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကို ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကားလေးတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်ကနေ ဒေးဒရဲကို အချိန် ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်၊ ၂ နာရီဝန်းကျင်အတွင်းရောက် ရှိနိုင်ပြီး အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ၂ နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုသန့်ဇင်ဦးက “ ကျွန်တော်တို့လောကမှာတော့ ဂိတ်စီနီယာလုဖို့အတွက် နည်းနည်းလေးလုမောင်းကျတာလည်းရှိပါတယ်။ ဂိတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်ပြောရရင်တော့ ဂိတ်ကြေး ၅သိန်းပေးရပါတယ်။ ရန်ကုန်ဂိတ်ဘက်ကိုပါ။ ဂိတ်ထုတ်ခံရရင်တော့ အဆုံးပေါ့။ ဒါကြောင့် သတိထားပြီးလည်း မောင်းကြရပါတယ်။ အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းတွေကတော့ ဟိုနေရာလူတင်၊ ဒီနေရာလူချရှိလို့ ကြာတတ်သလို လူပြည့်သွားပြန်ရင်လည်း မြန်မြန်လေးမောင်းကြပါတယ် ” လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။
လက်ရှိတွင် နယ်လိုင်စင်များဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းပြေးဆွဲနေမှုအတွက် အရေးယူရန်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့က မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောဆို သွားခဲ့သော်လည်း မော်တော်ယာဉ်ဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံးမောင်းနှင်ခွင့်ရှိပြီး ၂၀၁၅ မော်တော်ယာဉ်အရအရေးယူ ရန်မရှိကြောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုသန့်ဇင်ဦးက “ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့နဲ့သိပ်တော့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ ဆိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရက်စွဲတိတိကျကျထွက်မလာသေးပဲကြေညာထားတဲ့ အဆင့်မှာပဲရှိသေးလို့ အရမ်းကြီးတော့ပူပန်စရာမရှိပါဘူး။ နောက်ပြီးနယ်လိုင်စင်ဆိုတာကလည်း ရန်ကုန်လိုင်စင်ထက်သက်သာလို့ လုပ်ကိုင်ရအဆင်ပြေလွယ်ကူတာ ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လို ကားသမားတွေအတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။ ပိတ်တယ်ဆိုတော့လည်း ပိတ်တယ်ပေါ့ ” လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကို ပြောဆိုပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
VEHICLE RENTAL အတွက်လုပ်ငန်းပေါင်း ၉၄၆ ခုကိုရှာဖွေရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။